Onye na - emeputa mmanụ na China na onye na - ebubata ya, ndị na - ekwupụta Factory | Xianzhilou
Osisi & Nkube Organic
Sọpụrụ & Asambodo
Tag Archives: Mwepụta Mmanụ
Akpa ihe tii
Nnukwu Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom
Anọ kọfị Sigmatic Mushroom mix Gọọmet Black Coffee
Organic Black tii na Ganoderma lucidum
Ganoderma Lucidum Musọ akụkụ dum
High Quality Ganoderma Lucidum PE Reishi PE Re ...
1.Igbo: Ganoderma mma iberibe, Ganoderma lucidum wepụ 2. Nkọwapụta: 2g * 25 sachets Nchịkọta dị iche iche maka gị ịhọrọ ma ọ bụ anyị nwere ike ịhazi gị nchịkọta!
ase zuru ezu
coq10 coenzyme reishi ero wepụ ganoderma lucidum absorption ike ike ★ SUPERIOR ABSORPTION - Ọ dị mfe iji nweta ụdị isi ihe na-edozi ahụ nke na-echekwa ma na-echebe ike obi, ahụike obi yana ike cellular. CoQ10 na-enyekwa nkwado antioxidant na obi, ebe a na-etinye uche ya na ya. ★ EGO NA-EGO maka ndị ọrụ - ọkwa CoQ10 n'ime obi na anụ ahụ nwere ike ịmalite ịda ama mgbe anyị toro. Ike nke anụ ahụ ịnabata CoQ10 na-ebelata na afọ, ebe…
Akwụkwọ Mulberry bụ akwụkwọ nkụ nke mulberry, makwaara dị ka mulberry, wattle, mulberry, mulberry, wdg O nwere mmetụta nke iwetulata ọbara mgbali elu, abụba ọbara, ọgụ mbufụt.Besides na-ahụ maka ọgwụ na ịme ntutu, ime ahịhịa mulberry ka nwere ike iji ya mee. dika ezigbo nri nri, na nsonaazụ nke na enye tii tii kariri ahuike. Mmiri mkpụrụ osisi mulberry bara ụba bara ụba na amino acid, cellulose, mineral, flavonoids na ihe ndị ọzọ na-eme ka ihe na-egbu egbu, nke nwere ọrụ nke iwetulata ...
Nweta IGBO REISHI: Ngwakọta kọfị Reishi na kọfị na ngwa ngwa & ihe mkpo ahịhịa reishi, tinyere Reishi Mushroom Spore Powder, akwa ntụ ntụ aka iji nyere aka kwado usoro immume. AKW DAKWỌ DABILYR: :B :R: Gị: Ejikọtara ya na ụlọ akụ ndị Reishi Mushroom dịka ọgwụ nna nna, nkwalite mgbochi, enyemaka ụra na irighiri akwara, ngwakọta a na-atọ ụtọ na-enyere gị aka ime ka ị dabara kwa ụbọchị. DETOX & ANTIOXIDANT: GANOHERB Reishi Mushroom kọfị nwere nnukwu Ganoderma lucidum polysa…
★ ANYANWU EGO - Mgbapụta akpịrị na-akwado metabolism dị mma, ịsacha ọbara na ọkwa shuga dị mma esitela n’ókè kwesịrị ekwesị. ★ Jikọtara ya na MUSURU REISHI - Reishi Mushroom bụ nwaafọ nke ezi sitere n'aka USDA. Polysaccharide Ganoderma lucidum nwere nke ukwuu na Ganoderma lucidum spore ntụ ntụ na Ganoderma lucidum nwere ọmarịcha ọbara shuga dị ala. ★ agbakwunyere ginseng American - The ginseng saponins, ginseng polysaccharides, na ginsen ...
★ EGO NA-AK :ZIRI AHishi: Reishi Spore oil ewepụtara na log-akọ, sel-mebiri emebi reishi ero spore ntụ ntụ (crack crack> 99%), site na mmịpụta nke CO,, nke pụtara oke maka ịkwalite sistemụ mgbochi yana wepụ mmetụta nke mmanya, na-akwado a umeji na obi dị mma, na-ebelata ike ọgwụgwụ, na-emezi ahụike nke ọma. Ganoderma lucidum bụ ahịhịa dị elu nke enwere ike were ogologo oge ma ọ nweghị mmetụta ọ bụla. ★ AUTHENTIC & ORGANIC: Ewu anyị reishi na-etolite na c nke anyị ...
Chinese Professional Lingzhi Capsule - Ten mushroom complex – GanoHerb
★ MIXED WITH TEN MUSHROOM - 10 nke gụrụ akwụkwọ ọgwụ gụrụ nke ọma na otu okpu. Anyi na eji ahihia di elu na nke di egwu di egwu. Ọ bụ vegan, onye anaghị eri anụ na paleo. ★ KAROSTS YOUR YOURBARA ỌGWEGW - - Mee nkwado dị elu na GANOHERB USDA ahịhịa reishi ero: Nchịkwa a na - alụso ọrịa ọgụ bụ ihe ịchọrọ kwa ụbọchị iji nwee ahụike ma zere oyi nkịtị, nke ejirila ọtụtụ narị afọ. ★ CAFFEINE ENYERE ENWETA NA-EGO - Mee ka ike gị dị ...
Short Lead Time for Dried Ganoderma - Ganoderma Lucidum Bulk Spore Extract Powder Reishi Mushroom Powder – GanoHerb
★ NUTRITIONAL VALUE ENHANCER: Our Reishi Spore Capsule Plus na - ejikọta ihe dị iche iche dị mma nke maịị reishi ero spores na ntụ ahịhịa reishi wepụchara. Ọ na - echekwa ọdịdị nke Ganoderma lucidum. ★ ỌJARA ỌGWERGW: KWES :R:: Nke ọ bụla kapịnịsta ganoderma gbakwunyere 300mg / capsule na 100g GANOHERB spore ntụ ntụ nwere 7000mg nke ganoderma lucidum polysaccharides nke dị irè karịa reishi ...
China OEM Red Lucid Ganoderma - Ganoderma bitter Melon Capsule – GanoHerb
Nke a bụ nri ahụike sitere na Bitter melon, ganoderma lucidum, propolis, cell-wall gbajiri ganoderma lucidum, chromium picolinate. Ogologo oge ojiji ngwaahịa a na-enyere aka belata shuga na-arịa ọbara. Glọ ọrụ Ganoherb bụ ọkachamara nke na-emepụta ọrịre dị iche iche ganoderma lucidum ilu melon wepụ capsule （wedata shuga ọbara extract reishi wepụ. Ngwongwo ọgwụ na ahụ ike dị mma nke ganoderma lucidum ilu melon wepụ capsule （iwetulata shuga） reishi wepụ hav…
factory customized Reishi Extract Capsules - Organic Ganoderma lucidum Extract – GanoHerb
GanoHerb nwere ụdị Organic Ganoderma wepụ ntụ ntụ maka ịhọrọ. Anyị nwere mmịpụta mmiri, mmịpụta mmanya na mix mmịpụta ganoderma ntụ ntụ. Polysaccharides ndị ahụ wepụtara sitere na 5-40%, triterpene sitere na 0-12%, ị nwekwara ike ịgwa anyị mkpa gị, anyị nwere ike imepụta dịka ihe ịchọrọ. GanoHerb na-eji otu mmetụta, uto okpukpu abụọ, na ụdị ịgba bọọlụ, yana ntụnyere ọdịnala, ọ na-arụ ọrụ karịa. Ọ nwere ike ...
Factory making Cancer/Organic Reishi Lingzhi Extract - Gano spore capsule – GanoHerb
★WELLNESS,IMMUNITY & MORE: Studies have shown reishi mushroom could improve your immune strength, protect cardiovascular, control body weight, calm nerves, encourage good sleep and support general wellness. It also can increase appetite. ★TOP QUALITY ORGANIC REISHI: Our reishi mushroom grows in our own organic certified farm. and reishi spore capsule is made by low-temperature cell-wall breaking technology (crack-rate of 99%),GANOHERB has integrated cultivation, production, R&...
OEM Supply Mushroom Growing Shelves - Private Label Reduce Blood Glucose Natural Capsule – GanoHerb
12345Nke abuo> >> Page 1/5
Ebumnuche anyị bụ agafe na ọdịbendị Ahụike Ahụike Millennia na-
enye aka na Ahụike maka mmadụ niile
Ekwentị : +8615980534308
Email: zụọ ahịa5@xianzhilou.com
Ada: Haixi hi tech Industrial Park Na-adọ 9 Owuwu, obodo Shangjie, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province
Fujian XIANZHILOU NUTRA-ụlọ ọrụ CO., LTD. Apụta Products ,Sitemap ,Mobile Site
Ganoderma Lucidum ero , ero ntụ ntụ , Lingzhi Tea , Organic Reishi iberi , Reishi ero wepụ ntụ ntụ , Reishi Spore wepụ ,Ngwaahịa niile.